Jala Bultii Guyyaa Dhaloota Yessoo Kiristoo,Christmas ulfeeffachuuf nama kuma hedduutti Beteliheemitti yaa'uutti jira
Muddee 24, 2019
Kiristaaniyaanii Muddee 25 dhaloota Yessoo Kiristootoo,Christmas ulfeeffata. Beteliheem, lafa Yessoon itti dhalatee amma West Bank,Paalistiin jala jirutu nama kuma hedduutti jala tanaaf itti yaa’uutti jira.
Fulaan namii kuma hedduu itti yaahuutti jiru Paalistiyaain naannoo,Manger Square.Ijoolleen didiqqoon hiriira galtee muka kiritmaasii baachaa fulaa Yessoon itti dhalatee amma mana amantii kiristaana aitti jaaran gahan.
Namii nagumaan qophii tana keessa jira.Gama kaaniin Amerikaa Los Angeles keesastti ammo bulchoota warrii artistootii Hollywood bebeekamoon karaa irra yaa’anii warra karaa irra gargaaruutti jiran.
Los Angeles keessaa nama 59,000 tahutti karaa irra bula.Kana keessaa namii harka sadii goomphee lubbuu qabdu mataa itti gadi qabatullee hin qabu.
Bulchootaa fi hojjattootii Hollywood hedduun garuma naasootiin warrra kana gargaaruutit jiran.
Warra karaa irra bulu kana keessa ka hujii kennanifii jiraatee nama tahelleen hedduu. Nama waan hedduutti karaa irra bulcha.
Senegal,Afrikaa Dhiyaa keessaa biyya namii isii harkii 95 Musliimaati. Seera Islaamaa jajjabaan bultillee. Yoo Christmas ka akkanaa kana ammoo karaa,manneen nyaataa fi dhugaatii faaya Kirismaasii kanaan guutaman. Namii waan waliin qabu walii ulfeessee waliin jilata.